Francesco Totti Oo Ka Caawiyay AS Roma Inay Garaacaan Inter Milan, Iyo Juve Oo Guul Gaartay. - jornalizem
Francesco Totti Oo Ka Caawiyay AS Roma Inay Garaacaan Inter Milan, Iyo Juve Oo Guul Gaartay.
Koox oo uu dhiirogeliye u ahaa Francesco Totti AS Roma ayaa 3-1 ku garaacday kooxda Inter Milan oo marti loogu ahaa San Siro, waxaana ay Roma gaartay guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka.
Alessandro Florenzi ayaa kubad madax aheyd hogaanka ugu dhiibay ciyaarta oo rubac saac socota, lakiin waxaa ciyaarta barbareeyay oo Inter ku soo celiyay Antonio Cassano ku dhawaad xilligii nasashada.
Labada dhinac ayaa fursado furan isku helay qeybtii labaad ee ciyaarta ka hor inta uusan Pablo Osvaldo hogaanka u soo celinin Roma.
Osvaldo ayaa markaasi ka dib caawiye ka noqday goolkii Marquinho, taasoo u hubisay seddexda dhibcood, isagoo xagal ciriiri ah kubad ka geliyay shabaqa ciyaarta oo dhiman 10 daqiiqadood.
Inkastoo Osvaldo uu ciyaarta ku dhameystay gool iyo gool uu caawiye ka ahaa, Totti ayaa ahaa ciyaaryahankii sida aadka ah uga shaqeeyay guusha Roma, isagoo caawiye ka ahaa labo gool oo kala dhashay labadii qeyb ee ciyaarta, isla markaana u hubisay Roma seddexdoodii dhibcood ee ugu horeysay xilli ciyaareedka.
Dhinaca kale Juventus ayaa ku hanjabtay inay difaacan karto horyaalka Serie A ka dib markii ay 4-1 ku garaaceen kooxda Udinese oo marti loogu ahaa Stadio Fruli, inkastoo kooxda martida loo ahaa qeybtii hore casaan laga siiyay Željko Brkić.
Arturo Vidal ayaa kooxda horyaalka heysata hogaanka u dhiibay daqiiqadii 14aad markii uu rigoore u saxiixay ka hor inta uusan hogaanka u dheereynin Mirko Vucinic.
Sebastian Giovinco ayaana qeybtii labaad ee ciyaarta labo gool kale u sii dhaliyay Juventus ka hor inta uusan Andrea Lazzari halkoo gool u soo celinin kooxda minankeeda joogtay.
Labo kulan oo la ciyaaray ka dib Juventus ayaa lix dhibcood hogaanka ku heysa, waxaana 6da dhibcood la wadaaga Napoli iyo Lazio, iyadoo Lazio ay 3-0 ku soo dubatay kooxda Palermo halka Napoli ay 2-1 ku qaarjisay kooxda Fiorentina.